Ndezvipi zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ndezvipi zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse. Zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse chimwe chiporofita chezviitiko zvichaitika munguva yekupedzisira. Chisimbiso chimwe nechimwe chinomiririra chikamu chezviitiko zvekuguma kwenyika.
Nyaya yacho inoonekwa yakarongwa muBhuku raZvakazarurwa, iro rinotsanangura maonerwo akaitwa bhuku (mupumburu mukuru wakapetwa) muruoko rwaMwari. Bhuku racho rakanamwa nezvisimbiso zvinomwe, zvisina ani zvake aigona kuzvivhura. Kare, zvitambi zvaishandiswa kuchengetedza magwaro. Hapana aigona kuverenga gwaro asina kudambura chisimbiso. Sezvo pasina aigona kuputsa zvisimbiso, hapana aigona kurava bhuku racho.
«Ipapo ndakaona muruoko rworudyi rwouyo akanga agere pachigaro choumambo bhuku rakanyorwa mukati nokunze, rakanamwa nezvisimbiso zvinomwe.
Ndakaona mutumwa ane simba achidanidzira nenzwi guru achiti: Ndiani akafanira kuzarura bhuku nokusunungura zvisimbiso zvaro?
Asi kwakange kusina munhu kudenga kana panyika, kana pasi penyika, wakagona kuzarura bhuku, kana kutarira mariri.
Ndakachema zvikuru, nekuti hakuna kuwanikwa munhu wakafanira kuzarura nekuverenga bhuku, kana kuriverenga, kana kutarira mariri.
Ipapo mumwe wavakuru akati kwandiri: Usachema; Tarira, Shumba yorudzi rwaJudha, Mudzi waDhavhidhi, yakunda kuti izarure bhuku nokusunungura zvisimbiso zvaro zvinomwe.” Zvakazarurwa 5:1-5
Gwayana raMwari chete (Jesu) ndiro raigona kusunungura zvisimbiso nokuverenga bhuku. Sezvo chisimbiso chimwe nechimwe chaivhurwa, zvinhu zvinokosha zvakaitika panyika nekudenga.
1 Ndezvipi zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse: tsananguro
1.1 1st Chisimbiso cheApocalypse
1.2 2th Chisimbiso
1.3 3st Chisimbiso cheApocalypse
1.4 4st Chisimbiso cheApocalypse
1.5 5th Chisimbiso: Ndezvipi zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse
1.6 6th chisimbiso cheapocalypse
1.7 Chisimbiso chechinomwe
Ndezvipi zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse: tsananguro
Tsananguro yekuti zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse ndezvipi
1st Chisimbiso cheApocalypse
Gwayana parakazarura chisimbiso chokutanga, munhu aiva pamberi paMwari akati “uya” uye a mutasvi webhiza jena. Akanga ane uta nekorona uye akabuda kuti anokunda.
Ndakaona Gwayana parakazarura chimwe chezvisimbiso, ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichiti nenzwi romutinhiro: Uya uone. Ndakatarira, ndikaona bhiza jena; uye akanga akaritasva akanga aine uta; akapiwa korona, akabuda achikunda, uye kuti akunde. Zvakazarurwa 6: 1-2
Mumwe munhu aiva pamberi paMwari akati “uya” uye bhiza dzvuku rakaonekwa. Murwi wake aiva nebakatwa uye akakonzera hondo pakati pevanhu.
Wakati azarura chisimbiso chechipiri, ndakanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichiti: Uya uone. Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku; uye wakange akaritasva akapiwa simba kuti abvise rugare panyika, nekuurayana; akapiwa munondo mukuru. Zvakazarurwa 6: 3-4
3st Chisimbiso cheApocalypse
Wechitatu akati “uya” uye a Bhiza dema. Mukomana akanga akabata a zvikero uye inzwi rakazivisa mutengo wepamusoro wezvokudya panguva iyoyo.
Wakati azarura chisimbiso chechitatu, ndakanzwa chisikwa chipenyu chechitatu chichiti: Uya uone. Ndakatarira, ndikaona bhiza dema; uye akanga akaritasva akanga aine chikero muruoko rwake. Ndikanzwa inzwi richibva pakati pezvisikwa zvipenyu zvina, richiti: Pondo mbiri dzezviyo dzichatengeswa nedhenari, nezviyero zvitanhatu zvebhari nedhenari; asi usasvibisa mafuta newaini. Zvakazarurwa 6: 5-6
4st Chisimbiso cheApocalypse
Yechina ichinzi "uya" uye iyeRufu rwakauya rwakatasva bhiza rakachenuruka, richiteverwa neHadhesi. Vakauraya chikamu chimwe muzvina chevagari vepasi munzira dzakasiyana-siyana.
Wakati azarura chisimbiso chechina, ndakanzwa inzwi rechisikwa chipenyu chechina richiti: Uya uone. Ndikatarira, ndikaona bhiza jena; naiye wakaritasva anonzi Rufu; simba rakapiwa kwaari pamusoro pechikamu chechina chenyika, kuti auraye nemunondo, nenzara, nekuuraya, uye nezvikara zvenyika. Zvakazarurwa 6: 7-8
5th Chisimbiso: Ndezvipi zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse
Pakavhurwa chisimbiso chechishanu, Juan akaona mweya yavanhu vakaurawa nokuda kwevhangeri, vakanga vari pasi peatari. Artari yaiva nzvimbo mutemberi yaideurwa ropa rezvibayiro. Vanhu ava vakanga vapira upenyu hwavo nokuda kwavo rudo rwaMwari.
Vakafira kutenda vakabvunza Mwari kuti aizoita kururamisira rini. Mumwe nomumwe akagamuchira nguo chena uye akaudzwa kuti amirire kwechinguva chiduku, nokuti kwakanga kuchine vamwe vaKristu vashomanene vaizourayirwa kutenda kwavo.
Zvino vakadanidzira nenzwi guru vachiti: Kusvikira rinhi Ishe mutsvene wechokwadi, muchirega kutonga nekutsiva ropa redu pane vanogara panyika? Zvino vakapiwa nguvo chena, vakanzi vazorore chinguva chiduku, kusvikira uwandu hwevamwe varanda pamwe navo nehama dzavo dzaifanira kuurawa saivo hwapera. Zvakazarurwa 6: 10-11
6th chisimbiso cheapocalypse
Kudengenyeka kwenyika kukuru kwakazunungusa nyika pakazarurwa chisimbiso chechitanhatu. Zuva kwasviba, la luna Yakatsvuka, nyeredzi dzakadonha kubva kudenga, uye makomo nezvitsuwa zvakafamba. Pakati pekuvhiringika uku vanhu vose venyika vakavanda pasi pevhu. Vakapopota rufu, nokuti kuparadza kwacho kwaityisa.
Uye madzimambo enyika, nevakuru, nevafumi, nevatungamiriri, nevane simba, nevaranda vose, nevakasununguka vose vakandovanda mumapako nepakati pematombo emakomo; zvino vakati kumakomo nekumabwe: Wirai pamusoro pedu, mutivanze pachiso chaiye unogara pachigaro cheushe, nepahasha dzeGwayana. Zvakazarurwa 6: 15-16
Pakati pechisimbiso chechitanhatu nechinomwe pane chiono chevanhu vakatendeka kuna Mwari vanoiswa chisimbiso nokuda kwedziviriro yake. Chisimbiso chaMwari pahuma dzavo chairatidza kuti vaive vaMwari, vaive nedziviriro yake.
Gwayana rakati razarura chisimbiso chechinomwe, pakanga pane hafu yeawa kunyarara kudenga. Ngirozi nomwe dzakagamuchira hwamanda uye mumwe mutumwa akaisa a zvinonhuwira pamwe chete neminyengetero yavatsvene pedyo nearitari. Mutumwa akazadza mudziyo wezvinonhuhwira nomoto waibva paatari, akaukandira pasi. Paiva neimwe terremoto, kutinhira, mheni uye manzwi.
Zvino mumwe mutumwa wakauya, akamira pamberi pearitari, ane mudziyo wezvinonhuhwira wendarama; kukapiwa kwaari zvinonhuhwira zvizhinji, kuti zviwedzere paminyengetero yavatsvene vose, paaritari yendarama, yakanga iri pamberi pechigaro chovushe. kubva muruoko rwomutumwa utsi hwezvinonhuwira hwakakwira pamberi paMwari pamwe chete neminyengetero yavatsvene. Mutumwa akatora mudziyo wezvinonhuhwira, akauzadza nomoto wearitari, akaukandira panyika; kukavapo kutinhira nemanzwi nemheni nokudengenyeka kwenyika. Zvakazarurwa 8: 3-5
Zvisimbiso zvinomwe zvinoratidza kutongwa waMwari panyika. Mwari acharanga vanhu nokuda kwezvivi zvavo, asi achapa mubayiro avo vanoramba vakatendeka uye kuna Iye.” Zviitiko zvezvisimbiso zvinomwe zvinotyisa, asi kune tariro kumutendi.
Tinovimba kuti chinyorwa ichi chinokubatsira kuziva kuti zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse chii. Kana ikozvino iwe unoda kuziva Zvinova 7 matadzo makuru maererano neBhaibheri, tinokurudzira kuti urambe uchitsvaga Ziva.online.
Vatasvi vemabhiza vana veapocalypse chii?